डा. केसी १६औं अनशनमा इलाममा
२०७५ पौष २५ गते , बुधवार प्रकाशित
आफुसँग सहमति भए बिपरीत चिकित्सा स्वास्थ्य बिधेयक पारित भए पछि डा. गोविन्द केसीले आज अपरान्ह ५ बजेदेखि १६औं अनशन इलाममा शुरु गरेका छन् । आजै संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित भएको थियो ।
आज इलाममा एक बिज्ञप्ति जारी गर्दैै डा. केसीर्ले पाँच बजेबाट अनशन शुरु गरेका हुन् । उनले देशमा देखिएको भद्रगोल, अराजकता र दण्डहीनताको जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको गहन शारीरक समस्या तथा त्यसको उपचार पद्धतिका दुष्प्रभावहरुका कारण निर्णय क्षमतामा असर परेको आरोप समेत उनले लगाएका छन् ।
बारम्बार सरकार र सांसदहरुलाई विगतको सम्झौता स्मरण गराउँदै त्यस अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्न अनुरोध गर्दा त्यस विपरित माफियामुखी बुँदाहरु समेटेर संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विधेयक संसदमा पठाएकोमा त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै डा. केसी अनशनमा बसेका हुन् ।
डा. केसीका ६ बूँदे मागहरु :
१) १५औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा बिधेयक संसदबाट पारित गरियोस् ।
२) गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रि.वि. पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस् । त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गरियोस् । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन रोक्ने मन्त्री परिषदको निर्णय बाबजुद चोर बाटोबाट दिन लागिएको सम्बन्धन तत्काल रोक्दै दोषी पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गरियोस् ।
३) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस् । साथै पूर्वी पहाडका ताप्लेजुंग, इलाम ,पाँचथर,तेह्रथुम लगायतका जिल्लाका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा तथा मेडिकल शिक्षाका लागि लागि इलाम, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटांग, भोजपुर, उदयपुर, सिराहा र सप्तरी लगायतका जिल्ला समेटेर उदयपुरमा, सुदुर पश्चिमका पहाडका डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी, बझांग, अछाम, दार्चुला लगायतका जिल्ला समेटेर डोटी वा डडेल्धुरामा अबिलम्ब सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोलियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना शुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डा. केसीसग १५औं अनशनका बेला गरेका सहमतिलाई अक्षरसा पालन गर्न गराउन तत्काल अग्रसर भएर समस्याको समाधान गर्नु मात्र सही बिकल्प हुने जनमानसले अपेक्षा गरेको पाइन्छ ।
नेकपा बिप्लबले हत्याको बिरुद्ध नेपाल बन्द गर्ने
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राष्ट्रिय भेलाका सैद्धान्तिक तथा राजनैतिक प्रस्ताबहरु :
किन टरेको हो इरानमाथि अकेरिकी आक्रमणको योजना ?
विप्लवका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल मारिए